Ntọala ọkachamara mmiri mmiri na akọrọ na-agwakọta ogbo ihu etemeete ihu atọ na-emepụta ihe na onye na-ebubata ya. Dongmei
Ntọala ọkachamara mmiri mmiri kpọrọ nkụ na-agwakọta ogbo ihu etemeete ihu atọ
● ỌGWỤGWỤ: E si na Superior, Super Soft, Non-Latex Foam. Nke a na -enye mgbake dị ukwuu iji nye gị ihu ikuku ikuku na -enweghị ntụpọ. Ọ na -emekwa ka ọ dị mfe na ngwa ngwa itinye etemeete. Onye anaghị eri anụ na enweghị obi ọjọọ.
EC NKWUKWU & NKWUKWU: ngwụcha ngwụcha dị mma maka ịgwakọta nnukwu mpaghara, ebe ọnụ na-enye nkenke kachasị na-eme ka ha bụrụ sọks etemeete nwere ọtụtụ ebumnuche. Ogbo ndị a na -ebukwu ibu ma dị nro karịa mmiri. Enwere ike iji ha ụdị ngwaahịa etemeete dị iche iche gụnyere ntọala, ude BB, ntụ ntụ, ihe mkpuchi, iche, mmiri mmiri, wdg.
WAS EBEGHỊ EZI: N'ihi ịdị nro na ịdị nro nke sponge anyị, ha anaghị eme ka etemeete gabiga ókè. Nke a pụtara na obere ngwaahịa gị lara n'iyi. Nke a anaghịkwa akpasu akpụkpọ ahụ iwe dị ka sponge ma ọ bụ brushes siri ike. Akpụkpọ gị ga -ahụ gị n'anya maka nke a.
● Ọ NA -adị mfe ịdị ọcha: Naanị ihe ịchọrọ bụ ncha na mmiri ọkụ.
Dongshen raara onwe ya nye imepụta ngwaahịa etemeete okomoko kacha mma dị ọnụ ala.
Ojiji akọrọ: iji mmiri eme ihe maka itinye ngwaahịa mmiri ara ehi ma ọ bụ ude, ntọala, ude BB, ude mmiri, ihe mkpuchi. Jiri akwa nhicha akwụkwọ wee fesaa mmiri ahụ gafere oke ruo mgbe mmiri agaghị atachapụ. Gwakọta nwayọ iji belata nfufu na -enweghị isi.
Iji mmiri eme ihe: Mee ka sponge ahụ mee ka ọ dị nro, wee tinye ntakịrị ncha ntutu nwa na mpaghara mmetọ (enwere ike iji nchacha ma ọ bụ ncha ọkachamara). Jiri nwayọ ịhịa aka n'ahụ wee pịa ogbo ahụ iji mepụta afụ. Nọgide na -asacha ma na -afanyekwa ngwa ngwa ruo mgbe enweghị ntụpọ na ụfụfụ. Jiri akwa nhicha dị ọcha ma ọ bụ akwa nhicha akwụkwọ were nwayọ wepu mmiri oke, n'ikpeazụ, ikuku kpọnwụọ.
Otu esi ehicha:
1.Iji mmiri ọkụ mee mmiri ogbo ahụ ma tinye ntakịrị ncha na mpaghara ntụpọ.
2. Jiri nwayọ ịhịa aka n'ahụ wee pịa ogbo iji mepụta afụ.
3. Nọgide na -asacha ma na -afanyekwa ngwa ngwa ruo mgbe enweghị ntụpọ na suds.
4. Jiri nwayọ wepu oke mmiri na akwa nhicha dị ọcha ma ọ bụ akwa nhicha akwụkwọ & hapụ ya ka ọ kpoo.
Nke gara aga: Dongshen akwa mma osisi osisi aka sịntetik ntutu etemeete ntọala ahịhịa
Osote: Ọkachamara ọkachamara na -agwakọta etemeete etemeete maka nkụ ma ọ bụ mmiri
Ọkachamara ọkachamara na -agwakọta etemeete etemeete ...
Dongshen N'ogbe etemeete ogbo latex-free obl ...
Ntọala ịkpụ afụ ọnụ, Mee Ncha, Ịkpụ afụ ọnụ, etemeete ahịhịa setịpụrụ, Nịm etemeete ahịhịa, Ngwá Ọrụ Nchacha etemeete,